Kooxda qaranka xeegada barafka Soomaaliya oo uu joogsi hor yimid - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Tababaraha Per Fosshaug iyo cayaartooy xeegada barafka ee magaalada Borlänge. Soomaali iyo Iswiidhish labadaba. Sawirle: Martin Eriksson / Sveriges Radio
Kooxda qaranka xeegada barafka Soomaaliya oo uu joogsi hor yimid
Hoowl sahlan maaha in Ruushka sahal lagu galo
La daabacay fredag 10 januari 2014 kl 11.01
Kooxda qaranka soomaaliya ee xeegada barafka, oo laga aasaasey magaalada Borlänge, waxaa taariikhdeeda iyo ka qeeyb-galka tartanka adduunka ee ka dhici doona magaalada Irkuutisk dhacdana waqooyiga dawladda federaalka Ruushka, ay noqotay koox aad loo xiiseeyo iyadoona laga sameeyn doono aflaan, barnaamijyo horay looga sii daayay idaacadda la iska daawado ee tv-iyada caalamiga ah Frans 2 iyo sidoo kale idaacadda la iska daawado ee BBC-da.
Isla-markaana wax badan ey ka qoreen hayadaha wararka ee dalka iyo caalamkaba.
Hase yeeshee ay iminka kooxda la soo gudboonaatey caqabad, middaasina oo la xiriirta in aaney suurtagal u noqon kooxda sidii ey uga qeyb-qaadan lahayd tartanka Irkuutisk ka dhici doona maadaama ey xubno ka mid ah kooxda ku adkaan doonto sidii ey viise uga heli lahaayeen dalka Ruushka. Middaasina ugu wacan tahay iyaga oo aan heeysan dhalashada dalkan Iswiidhen, sida ay qortay hayadda wararka Iswiidhen ee TT.
Hoowlaha la xiriira dalabaadka ogolaanshaha viisada dalka Ruushka ayaa ah hoowlo aad ugu dhib badan ruuxa dooneya inuu booqasho ku tago, middaa waxaa ka sii dhib badan kolka uu shakhsigu yahay qaxooti soomaaliya ka soo jeeda oo aan heey-san dhalshada Iswiidhen, hase yeeshee leh baasaboorka la siiyo soo-galootiga ee lagu magacaabo främlingspass.
- Hoowlahaasi ayaan weli dhammaan, sida uu u sheegay hayadda wararka Iswiidhen ee TT, madaxa mashruuca kooxda Patrik Andersson. Isagoona intaa raaciyay:
- In hoowshan ey u xil-saareen la taliye ku howl-galayey illaa iyo bishii maajo ee sannadkii ina dhaafay ee 2013, hase yeeshee ay tahay howl aan sahlanayn. Wixii amuurtaa ka soo kordha dib ayaan idinkala soo socod-siin doonnaa.
Tartanka adduunka ee xeegada barafka ayaa furmi doona gabagabada bishan jannaayo iyadoona kooxda qaranka Soomaalidu 25-ka bishan ey cayaarta ugu horeeysa isku hardiyi doonaan dhiggooda ee dalka Jabaan.
Amuurtaa wixii ku soo kordha dib ayaan idinkala soo socodsiin doonnaa.